Muuqaalka Duet ayaa kaniinigaaga u beddelaya shaashad labaad oo kombuyutarkaaga ah | Androidsis
Manuel Ramirez | | Codsiyada Android
Guriga inta badan waxaan ku leenahay dhowr aalad waxayna noqon kartaa inaan leenahay taleefanka gacanta sanado yar ka hor oo aanan garanayn sida loo siiyo nolol cusub. Waxaa laga yaabaa inay noogu habboon tahay u rog shaashaddaada mid labaad kombuyutarkaaga ama Mac-gaaga.
Taasi waa, waxaad awoodi doontaa inaad u beddesho taleefanka gacanta ama kaniiniga, oo ka fiican kiiska labaad cabirka shaashadiisa darteed, oo aad u beddesho mid labaad oo aad ku horumarin karto wax soo saarkaaga, rsamee hawlo badan ama xulashooyinka loogu talagalay tafatirka fiidiyowga inay kuu samayn karaan badwaynta wanaagsan. Beddelaad aan ku fulin doonno barnaamij weyn oo maalmo ka hor ka yimid dukaanka barnaamijka illaa Android.
1 Helitaanka Muuqaalka Duet ee Android
2 Sida loogu beddelo shaashadda moobilkaaga ama kaniiniga mid labaad oo kombuyuutarka ah
Helitaanka Muuqaalka Duet ee Android
Dhowr maalmood helitaanka Duet waxaa laga heli karaa Play Store adoo ku daraya kuwa horumariya. Taasi waa waxaad awoodi doontaa inaad u beddesho kaniinigaas gabal-dhac mid labaad oo loogu talagalay kombuyutarkaaga oo leh Windows ama Mac; habka, aad ugu dhakhsaha badan waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad isticmaasho PC-gaaga oo leh Windows 10 si aad uga jawaabto wicitaanada ku soo dhaca mobilkaaga waayo-aragnimo fiican oo raaxo leh.
Muuqaalka Duet wuxuu muddo dheer ku soo jiray qalabka iOS. Caddaalad ilaa sanadkii 2014 waxay ogolaatay isticmaalka iphone iyo ipad si loogu beddelo bandhig labaad oo loogu talagalay labada Mac iyo PC. Marka laga bilaabo maanta, illaa iyo inta aad haysato taleefan, kiniin ama Chromebook leh Android 7.1 ama ka sareeya, waad sameyn kartaa isla sidaas.
Waa inaan dhahnaa ma wajaheyno xalka kaliya ee ah in shaashadda mobiilkaaga ama kaniiniga loo beddelo mid labaad, laakiin kuwo kale oo badan ayaa jira, laakiin waa kuwa soo saareyaasha Duet-ka ah oo ka hadlaya qalabkooda inuu yahay kan wax ku biiriya badankood. Waxay ka hadlaan taageerida barxad, 256-bit encryption, cusbooneysiin bille ah iyo wax qabad aan dib u dhac jirin.
Sida loogu beddelo shaashadda moobilkaaga ama kaniiniga mid labaad oo kombuyuutarka ah
Muuqaalka Duet-ka ayaan kuu sahli doonin marka hore. Waxaan nahay ka hadlaya app a premium, oo aysan ku jirin nooc tijaabo ah, oo ku kacaya .21,99 XNUMX. Haddii miisaaniyaddii kaa maqnayd, sida xaqiiqada ah waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid waa inaad ku qortaa liiska waxaad rabto oo aad sugto dalab hoos u dhigaya qiimaha. Caqli ahaan waxaan ka hadlaynaa barnaamij ka faa'iideysanaya wax soo saar noocyo badan oo xirfadlayaal ah, sidaa darteed waan fahmi karnaa iyadoo beddelidda aaladaha aynaan adeegsan, ay kor u qaadeen qiimaha.
Si aan ugu raaxeysano barnaamijkan waxaan u baahan doonnaa abka wehelka labadaba Mac, oo leh nooca 10.14 ama ka sareeya ee Apple OS, iyo Windows, oo leh nooca 10. Waan ku xirnaan doonnaa kombiyuutarka adoo adeegsanaya USB Type-C cable (sida ay ku dhacdo Samsung Dex, in kasta oo microUSB ay u qalanto) ama marinka wireless-ka; ugu yaraan halkan waxaan ku haysannaa xulashooyin kaladuwan mana lagu qasbin inaan raadinno dongle haddii aan u baahanahay. Waxaa lagaa digayaa in isku xiraha microUSB uusan ansax ahayn waana fahmaynaa inay ugu wacan tahay xawaaraha gudbinta ...
Markaa waa inaad kaliya iibsataa abka:
Hubi nooca Mac OS iyo Windows 10 Maxaad haysaa
Hubso inaad haysato isku xirnaanta nooca-C-USB.
Hadda waxaan u furaynaa barnaamijka aaladda aan dooneyno inaan beddelno oo barnaamijku si otomaatig ah ayuu u ogaan doonaa qalabka.
Shaashadaas taabashada waxaan ka maamuli karnaa desktop-ka iyada oo leh faa iidad aad u weyn waxayna noo ogolaaneysaa inaan ku raaxeysano taxanaha faa'iidooyinka sida shaqo badan, wax soo saar badan, nuqul wax ku ool ah oo wax ku ool ah iyo hawlo kale oo taxane ah oo aad dhab ahaan u siineyso madaxaaga.
Una app lagu magacaabo Duet Display in, inkasta oo ay qiimo jaban tahay iyo qiime sare, waxay ku siin doontaa khibrad aad u badan oo aad ku raaxeysato si aad u dhigto shaashad labaad kombuyuutarkaaga, ama iyada oo loo marayo Windows 10 ama Mac OS. In ka badan barnaamij xiiso leh maalmahan markaan caadi ahaan leenahay aalado ku keydsan khaanadda miiskeena oo aan badbaadin karno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo rogo shaashadda qalabkaaga Android mid labaad oo loogu talagalay PC-gaaga ama Mac-gaaga
Huawei Watch GT 2: Falanqaynta nooca cusub ee smartwatch